30 sano kadib, Soomaaliya oo marti gelinaysa ciyaar kubadda cagta ah oo caalami ah. | puntlandi.com
30 sano kadib, Soomaaliya oo marti gelinaysa ciyaar kubadda cagta ah oo caalami ah.
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sodon sano kadib marti gelindoonta ciyaar kubadda cagta kabdib booqashadii uu dhowaan magaalada Muqdisho ku tagay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Afrika Axmed Axmed.
Axmed Axmed ayaa ku casuumay Soomaaliya inay bilaabaan abaabulka kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo yeelandoonaan Soomaaliya iyo Jibuuti
Kulankaan ayaa ka dhicidoona Muqdisho.
Muqdisho ayaa marti gelinta ciyaaraha caalamiga ah waxaa ugu dambeysay sanadkii 1988, tan iyo waqtigaas kadib waxay Muqdisho hoy unoqotay dagaalo sokeeye, maleyshiyo beeleed iyo ururada argigixiisada.
Madaxweynaha dowladda federalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday nadaxweynaha xiriirka kubadda cagta Afrika in Soomaaliya loo ogolaadaan inay marti geliso ciyaar kubada cagta ah oo caalami ah.
Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Afrika ayaa codsaday in la faarujiyo garoomada kubadda cagta ee Muqdisho kuyaala, kuwaas oo qaarkood isku badalay xarumo ciidan.